Izindlela asebenzayo ukuqeqeshwa ngokwengqondo yezenhlalakahle njengesisekelo ekwakheni umqondo yesimanje wezemfundo
Izinga izuzwe impucuko kudinga ukuba athole okwanele imfundo paradigms ukuthi anganikeza hhayi kuphela ukudluliswa kolwazi, kodwa ukwenza umuntu ukulungele bezibona ezweni oguqukayo nonekhono cikelela ngemphumelelo lezi zinguquko. Ngakho-ke, esizukulwaneni imibono emisha emkhakheni ukwakhiwa izinhlelo zokufundisa akukhona ukuthi kubaluleke kuphela ukudala yesimanje nobuchwepheshe ezemfundo, kodwa futhi ufaka phakathi okuqukethwe yezindlela ukuqeqeshwa asebenzayo zenhlalo ngokwengqondo. Ukuthuthukisa izinqubo zokufunda ezenzeka nokushintsha izinto eziza kuqala kwezenhlalo kanye namanani, kudinga yena, kwathatha elisekela ezingokwengqondo Pedagogical yesimanje yokufunda. Lokho Ukucabangela ukuthambekela zenhlalo-ngokwengqondo ngokuya njengenkondlo ebonisa isidingo umgomo ukufeza izinguquko qualitative emkhakheni wezemfundo. Empeleni ubuchwepheshe Pedagogical senze enjalo izinhlelo Pedagogical matrix kutsi bakwati kutakhela inqubo yokufunda ngempumelelo.
Izindlela asebenzayo ukuqeqeshwa yezenhlalakahle ngokwengqondo bebodwa, ngokwemvelo yalo ebalulekile is ukuguqula yokufunda isu kungaba akha iziqu esinjalo, izici eyinhloko okuyizinto ukuhamba nezincazelo zamakhono. Nezinhlangano kuqeqesha, ezifana amanyuvesi, ukugcizelela phakathi ukuthuthukiswa izifundo futhi eyala abakuhlakulelayo idluliselwe izidingo ugqozi umfundi nezindlela okuxoxwe kukhona ithuluzi ekuzuzeni ikhono okhokhelwayo. Ezemfundo kuleli cala ikuvumela ukuthi usebenzise yonke engaba siqu umfundi, yokugqugquzela izisusa izithakazelo ezifihliwe.
Ukusetshenziswa izindlela ezihlukahlukene ezintsha zokufundisa, ngokuvamile, awumusha ku pedagogy. Ukuhlola zalesi simo psycho-Pedagogical kunikezwa ukunakwa kakhulu ochwepheshe theory. Nokho, njengoba umthetho, inkinga nhlobo njengokufa okuhle umsebenzi eziyinkimbinkimbi, kodwa njengoba ehlukile - inkinga yenkinga Pedagogical nezingokwengqondo. Le ndlela yesimanje iwukuba organically "bamba" ku inqubo yemfundo njengoba izici Pedagogical nezingokwengqondo ukuqeqeshwa.
Ngo didactics yesimanje zanqwabelana arsenal elikhulu izindlela eziphumelelayo futhi kungase kutholakale ukuthi bakha ngokuphelela kwazo ohlelweni didactic futhi izisekelo ngokwengqondo yokufunda eziye lwenteke ngempumelelo emikhakheni ehlukahlukene umsebenzi kwezemfundo. Njengomthetho, ngezigaba zabo futhi ukuhlonza inkomba ezingeni lokuzivivinya abafundi ngesikhathi kufundwa. Ngesisekelo le nkomba, eyisisekelo izici ezilandelayo ngezigaba:
¾ imithombo yolwazi;
¾ logic elisetshenziswa izindlela ukuqeqeshwa;
¾ uhlobo evelele ukuqeqeshwa;
¾ lokuzuziwe nekutsi ezingeni nkomoni nogqozi engqondweni yethu;
¾ imingcele problematical wafunda izinto;
¾ imisebenzi didactic lwenziwa Paradigm ikakhulukazi kwezemfundo;
¾ izinhlobo nezindlela yokufundisa.
Naphezu kwakho konke lokhu yobuningi tindlelanchubo umfuziselo ngezigaba zokufundisa, izindlela asebenzayo ukuqeqeshwa ngokwengqondo yezenhlalakahle noma yisiphi sazo abhekwa ephumelela kunazo.
ukuhlolwa kwe-ukubaluleka kwalezi zindlela okunjalo kusekelwe yokuthi ingasetshenziswa cishe kunoma yisiphi isigaba inqubo yemfundo, kungaba master eyinhloko umbono kokuqala mayelana nale ndaba, futhi liphetha ngamazwi ukulawula ukwakhiwa of abafundele umsebenzi. Njengoba ukusetshenziswa kwanoma yisiphi nezindlela inqubo yemfundo hhayi ingaba njengesihluthulelo isiphetho ngokwakho, ukusetshenziswa asebenzayo kungenzeka ukuthi zibone ikhwalithi jikelele e variability kanye layo nekghono.
Izinto Radioactive - yini ingozi yangempela?
Iqembu izinkanyezi united ngegama elilodwa. Constellation namaqiniso eziphawuleka kakhulu ngazo
Inkwantshu Umlobi sika: Ubangela futhi Ukwelashwa
Nomhlobiso Floral - yasekuqaleni futhi kukhanga!